Kulamada maanta ee horyaalka Ingiriiska - BBC Somali
Kulamada maanta ee horyaalka Ingiriiska
Maanta Horyaalka Ingiriiska waxaa la dheelayaa 3 kulan oo kali ah.
Ciyaarta hore waxa ay dhexmari doontaa kooxaha Tottenham iyo Crystal Palace.
Tababaraha kooxda Tottenham, Mauricio Pochettino, ayaa waxaa suuragal ah in ay u wada saftaan ciyaaryahanada khadka dhexe ka dheela ee Mousa Dembele, Christian Eriksen iyo Ryan Mason kaddib markii ay ka soo kabteen dhaawacyo soo gaaray.
Kooxda Crystal Palace ayaa xagaagan wacdaro ku bilowday horyaalka iyada oo maantana la filayo in ay soo bandhigto ciyaar wanaagsan.
Ciyaarta labaad ayaa waxa ay dhexmari doontaa kooxaha Liverpool iyo Norwich.
Liverpool waxaa ka maqnaan doona kabtanooda Jordan Henderson kaddib markii uu ka jabay lugta, waxayna u badan tahay in ciyaaryahankan uu kooxdaasi ka maqnaan doono ilaa iyo 8 todobaad.
Daniel Sturridge ayaa isna dib ugu soo laabtay tababarka kaddib markii qaliin lagu sameeyay bishii May waxaana suuragal ah in ciyaarta galabta uu ka qeyb qaato.
Halka kooxda Norwich ay ka maqnaan doonaan Gary Hooper iyo Youssouf Mulumbu.
Ciyaarta saddexaadna waxaa wada yeelan doona kooxaha Manchester United iyo Southampton. Ciyaaryahanka dadabka dambe ee difaaca uga dheela kooxda Manchester United ee Luke Shaw ayey suuragal tahay in inta ka dhiman xagaagan uusan dheelin kaddib markii uu lugta ka jabay, waxaana lagu wadaa in booskiisa uu safto ciyaaryahan Marcos Rojo, halka Marouane Fellaini iyo Wayne Rooney ay ciyaarta ka qeyb qaadan karaan.
Dhanka Southampton-na weeraryahankooda Sadio Mane ayaa laga yaabaa in uu lagu bilaabo ciyaarta maanta kaddib markii uu kaydka galay todobaadkii hore, ciyaaryahanno kale oo kooxdaasi ka tirsanna shaki ayaa laga muujiyay in ay safan karaan kulanka galabta.